Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland oo ka hadlay qorshe howleedka Baarlamaanka – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland oo ka hadlay qorshe howleedka Baarlamaanka
Barlamaanka Maamulka Jubbaland oo dhawaan la caleemo saaray ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshe howleedka horyaalla barlamaankaasi.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay inay wadaan dhismaha gudiyada uu baarlamaanka yeelanayo, waxaana uu intaa ku daray inay guda gali doonaan sidii loo xoojin lahaa arrimaha dib-u-heshiisiinta.
“Baarlamaanka waa curdan, dhawaan ayaa la dhisay, waxaana lagu soo xulay qaab deegaan, marka qorsaha waxaa noogu jirta in aan dar dargelino howlaha baarlamaanka uu qaban doono xilliga ugu soo horeeya, marka aan dhameystirno gudiyada uu yeelanayo baarlamaanka” ayuu yiri Sheekh Cabdi Maxamed.
Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa xusay inay jirto cabasho ku aadan qaabka lagu soo xulay baarlamaanka, waxaana uu intaa ku daray in ay gacan ka geysan doonaan sidii ay u xalin lahaayeen dadka cabashada qaba.
“Way jirtaa cabasho ku aadan qaabka baarlamaanka lagu soo xalay ee ah dhanka deegaanka, marka dadaal ayaan wadnaa oo aan ku xalineyno arrintaas, runtii waxaa jirta deegaanno gacan aan ugu jirin maamulka oo ay ku suganyihiin Al-Shabaab, kuwaaasi wakiilo ayaa baarlamaanka u joogay, balse markasta waxaan ka shaqeyneynaa dib u heshiisiinta” ayuu hadalkiisa ku soo gabo gabeeyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland.
Arday Soomaaliyeed oo wacadaro ka dhigtay bandhig dhaqameed lagu qabtay Turkiga “SAWIRRO”